भरतपुरको वडा कार्यालयमा बम बिस्फोट, विप्लव नेतृत्वको संलग्नता रहेको आशंका ! - PUBLICAAWAJ
प्रकाशित : बुधबार, फागुन २९, २०७५११:२५ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
काठमाडौँ, गए राती करिब १२:३० बजे चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिकाको वडा कार्यालयमा बम बिस्फोट भएको छ । महानगरपालिका-५ को तोरिखेतमा रहेको वडा कार्यालयमा भएको शक्तिशाली सिलिण्डर बम विस्फोटले कार्यालयको झ्यालका सिसा फुटेका छन् भने बिस्फोट पश्चात लागेको आगोले कागजपत्रसमेत जलेको जीला प्रहरी कार्यालयले बताएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुशील सिंह राठौरले घटनाको पुष्टि गरेका छन् । घटनाको जानकारी पाए बित्तिकै महानगर दमकल र सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा लिईएको प्रहरी उपरीक्षक राठौरले बताएका छन् ।
प्रहरीले विप्लव नेतृत्वको पार्टीको संलग्नता हुनसक्ने अनुमान लगाएता पनि बिस्फोट कसले गरायो भन्ने बारे अझै खुलासा भएको छैन । बिस्फोट गराएको आशंकामा प्रहरीले ६ व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान शुरु गरेको छ ।
निषेधाज्ञा अटेर गर्नेलाई कडा कारवाही, २०० जना नियन्त्रणमा
पदार्थ सेवन गरी जबर्जस्ती बलात्कार गर्न खोज्ने पक्राउ !
काठमाडौंमै सुन पसल चोर्न सटर फोड्दै गरेका भारतीय चोरहरु पक्राउ !